ကြယ်တစ်ထောင်ပုံပြင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၂၁ ခုနှစ်ထုတ် ထိုင်းရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲ
ကြယ်တစ်ထောင်ပုံပြင် (အင်္ဂလိပ်: A Tale of Thousand Stars; ထိုင်း: นิทานพันดาว – 1000stars, RTGS: Ni-than Phan Dao – 1000stars) သည် Earth Pirapat နှင့် Mix Sahapap တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၂၁ ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။
၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ (၂၀၂၁-၀၁-၂၉) – ၂ ဧပြီ ၂၀၂၁ (၂၀၂၁-၀၄-၀၂)
ဒါရိုက်တာ အောက်ဖ် နိုပ္ဖာရနစ္ဆ ရိုက်ကူးပြီး GMMTV က ထုတ်လုပ်သည့် ဤဇာတ်ကားသည် ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၁၅၌ ကြေညာခဲ့သည့် New & Next အစီအစဉ်အရ ၂၀၂၀အတွက် GMM က ထုတ်လွှင့်မည့် ဇာတ်ကား ၁၂ကားတွင် တစ်ကားအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
မူလက ၂၀၂၀အတွင်း စတင်ထုတ်လွှင့်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း၊ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၉ရောက်မှ GMM 25 နှင့် LINE TV တို့က အပတ်စဉ်သောကြာနေ့ ည ၈:၃၀ နာရီ နှင့် ၁၀:၃၀ နာရီတို့တွင် အသီးသီး ထုတ်လွှင့်ခဲ့ရာ ဧပြီလ ၂ရက်တွင် ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်သည်။
၂ သရုပ်ဆောင်များနှင့် ဇာတ်ကောင်များ
လုပ်အားပေးဆရာမ ထော့ဖန်သည် ယာဉ်တိုက်မှုဖြင့် ဆုံးပါးသွားရှာပြီး၊ နှလုံးကို ထီရန့်အား လှူခဲ့သည်။ ထီရန်သည် ထော့ဖန်ချန်ခဲ့သည့် ဒိုင်ယာရီကို ဖတ်ရင်း ထော့ဖန့် ဘဝ၊ လျှို့ဝှက်ချက်၊ စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့် ထိုနှစ်၏ နောက်ဆုံးညတွင် ဖာပန်းဒေါင်းချောက်ကမ်းပါး၌ ခေါင်းဆောင် ဖူဖာနှင့်အတူ ကြယ်တစ်ထောင်ပြည့်အောင် ရေတွက်လိုကြောင်း သိခဲ့ရသည်။ ထော့ဖန်ဆန္ဒများကို ဖြည့်ဆည်းရင်း လုပ်အားပေးဆရာလေး တစ်ဖြစ်လဲ သူဌေးသားလေး ထီရန်သည် သစ်တောခေါင်းဆောင် ဖူဖာနှင့် ဆုံရလေသည်။
သစ်တောအရာရှိ ခေါင်းဆောင် ဖူဖာ ဝီရိယနုန် အဖြစ် ပီရာပတ္တ ဝတ္ထနသေတ္တသီရိ (Earth)
လုပ်အားပေး ဆရာလေး ထီရန် သောပါသီတသကုန အဖြစ် သဟာပပ္ပ ဝင်္ဂရစ္ဆ (Mix)
ထော့ဖန် ချရဖွန် အဖြစ် သာရုစန အပီသမေမွန်ကောလ (Aye)
(ထီရန့် သူငယ်ချင်း) တွန် အဖြစ် နဝတ် ဖုံဖိုထင်ဂန် (White)
ဒေါက်တာနာမ် အဖြစ် ကရိတ္တနေ အရသာလပြာကိတ (Nammon)
(ခမာ့သား) လောင်ထယ် အဖြစ် ထနဝဿ ရတနကိဇဖိုင်သာလ (Khaotung)
(စက်ပြင်သမား) ရော့ အဖြစ် နဝရတ် ကရဏကော် (Champ)
လန် အဖြစ် သတ္တဘူတ လယ်ဒေကေ (Drake)
အာရီ အဖြစ် ကမွန်လာပတ် ဒေါက်မွန်တာ (Aum)
မီကျူး အဖြစ် ကိနုကို ဝေါရဖန်မိုင် (Mayu)
ခေါင်နွန်း အဖြစ် အာကီရာပေါလ် ဂျိနပါညို (Achi)
အင်တာ အဖြစ် မရင်ဒါ ဟာလ်ပင်
ကာလယ် အဖြစ် ဂင်ဂျန် ယနာထစ် (Gim)
ထီရန့်အဖေ ထီရာယွတ် အဖြစ် ဇက္ကရိတ အမ္မရတ (Tom)
ထီရန့်အမေ လာလီတာ အဖြစ် ပဝီန ဆရီဝသကုလ (Jeab)
ရွာသူကြီး ခမာ ဗျင်လယ် အဖြစ် ဝတယျ ဇေထပေ (Thanom)
ဆက်ဒါ အဖြစ် ထနုံသက် သုဖကန (Nong)
နာမ့်ဇနီး Jeab အဖြစ် ဖတ်ချရာ တုထုံ (Kapook)
EP1 - The place where it's calleda"home", isaplace that provides happiness. (ထိုင်း: ที่ไหนมีความสุข ที่นั่นก็คือบ้าน)
EP2 - Be determined and endured with the obstacle, to prevent ourselves from getting disappointed from the decision we made. (ထိုင်း: ตั้งใจและอดทนต่ออุปสรรค เพื่อไม่ทำให้ตัวเองผิดหวัง กับเส้นทางที่ได้เลือกไว้)
EP3 - To win someone's heart, you must first use your own. (ထိုင်း: เพราะเราให้ใจไป เราจึงได้ใจกลับมา)
EP4 - Sacrificing for others is the greatest bravery. (lang-thการเสียสละเพื่อส่วนรวม คือความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่)
EP5 - Accept ourselves first, before letting others accept. (ထိုင်း: รู้จักยอมรับตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะให้คนอื่นยอมรับ)
EP6 - If you believe and are confident that you have done the right thing today, there's nothing to be fear of tomorrow. (ထိုင်း: ถ้าเชื่อมั่นว่าวันนี้ทำสิ่งที่ถูกต้อง พรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว)
นิทานพันดาว Ni Taan Pun Dao နပတ် အင်ဇေဝါ (Gun) Official OST 
สายตาโกหกไม่เป็น Sai Ta Go Hok Mai Pen ပီရာပတ္တ ဝတ္ထနသေတ္တသီရိ Official OST 
นิทานพันดาว (ทอฝัน Version) Ni Taan Pun Dao (Torfun Version) သာရုစန အပီသမေမွန်ကောလ Official OST 
นิทานพันดาว (ภูผา Version) Ni Taan Pun Dao (Phupha Version) ပီရာပတ္တ ဝတ္ထနသေတ္တသီရိ (Earth) Official OST 
ลม Lom (Wind) Num Kala EP10 
แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร Gaem Nong Nang Nan Daeng Kwa Krai (Your cheek is rosier than anyone else) Khian Kai Lae Wanich EP3 
ให้นานกว่าที่เคย Hai Narn Kwa Tee Koey ([I wish] it'd have been longer [then it's used to be] KLEAR & Phai Pongsathorn First Official Trailer  
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ - ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၀တွင် Dreamscape Entertainment ကုမ္ပဏီက ယခုဇာတ်ကားအပါအဝင် GMMTV က ဇာတ်ကားငါးကား ထုတ်လွှင့်ခွင့် ရရှိထားကြောင်းနှင့် iWantTFC မှ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၉တွင် GMMTV နှင့် တစ်ချိန်တည်း၊ တစ်ပြိုင်တည်း ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
ထိုင်ဝမ် - ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၉မှစ၍ LINE TV Taiwan က အပတ်စဉ် သောကြာည ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်သည်။
↑ "นิทานพันดาว" เจอดราม่า! เปลี่ยนอาชีพพระเอกจาก ทหาร เป็น ผู้พิทักษ์ป่า (in Thai)။ Sanook.com (29 April 2020)။ 18 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ เปิดโผซีรีส์ใหม่ปี 2020 ของ GMMTV ทั้งซีรีส์วาย, ภาคต่อ, รีเมกเกาหลี และลิขสิทธิ์ F4! (in Thai)။ 28 February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New Project TV Series Of GMM TV For 2020 (in English)။ 28 February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ เผยเคมีสุดจิ้น "เอิร์ท-มิกซ์" ผ่านตัวอย่างธรรมชาติโอบล้อม "นิทานพันดาว" (in Thai)။ Sanook.com (7 January 2021)။
↑ [Official Trailer นิทานพันดาว 1000stars]။ GMMTV။ 10 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "นิทานพันดาว ปล่อยตัวอย่างเต็มแล้ว ซีรีส์วายโรแมนติกดราม่าฟอร์มใหญ่ที่น่าชมที่สุดประจำต้นปี 2021" (in Thai)၊ The Standard၊7January 2021။
↑ นิทานพันดาว Ost.นิทานพันดาว 1000stars။ GMMTV Records။
↑ สายตาโกหกไม่เป็น Ost.นิทานพันดาว 1000stars။ GMMTV Records။
↑ นิทานพันดาว (ทอฝัน Version) Ost.นิทานพันดาว 1000stars။ GMMTV Records။
↑ นิทานพันดาว (ภูผา Version) Ost.นิทานพันดาว 1000stars - Earth Pirapat။ [ GMMTV Records။
↑ ลม - NUM KALA「Official Audio」။ GMMTV Records။
↑ แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช (Official)။ GMMTV Records။
↑ GMMTV 2020 นิทานพันดาว A TALE OF THOUSAND STARS။ GMMTV Records။
↑ ให้นานกว่าที่เคย (Collab Version) - KLEAR x ไผ่ พงศธร [Official MV]။ GMMTV Records။
↑ We're bringing you more kilig, mystery, and kulit with more Thai Series!။ Dreamscape Entertainment (10 September 2020)။ 17 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "More Thai BL series to invade local streaming"၊ DZRH၊ 15 September 2020။ 17 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 潘怡豪 (2021-01-27)။ 泰國超夯BL劇《千星傳說》來台獨家上架！霸氣男與校草戀帥到炸裂 (in zh-Hant-TW)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြယ်တစ်ထောင်ပုံပြင်&oldid=672252" မှ ရယူရန်
၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၅:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၅:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။